इस्ला डे लोबोस, क्यानरी द्वीपसमूह मा सबैभन्दा सानो | यात्रा समाचार
इस्ला डे लोबोस, क्यानरी द्वीपसमूहको सबैभन्दा सानो
मरियम | | España, टापुहरू
छवि | Canarias.com
सम्पूर्ण क्यानरी द्वीपसमूह मध्ये, फुर्टवेन्टुरा अफ्रिकाको सब भन्दा नजिक छ। यसको उत्तरपश्चिममा माछावालाहरूको लागि सानो टापुको शरणस्थान र स्पष्ट बालुवाको साथ शानदार समुद्र तटहरूको घर छ।
विगतमा, यस टापुको भ्रमण गर्नु केही गाह्रो थियो किनकि यो सानो समूहमा गर्नु पर्ने थियो जुन सानो डु boat्गामा यात्रा गर्थ्यो जुन बिहान तिनीहरूलाई छोड्छ र दिउँसो उठाउँदछ। आजकल, सबै कुरा सजिलो छ र वास्तवमा आगन्तुकहरूको संख्या बढेको छ। तर के इस्ला डी लोबोस यस्तो विशेष स्थान बनाउँछ? अर्को, हामी इस्ला डी लोबोसमा भ्रमण गर्न केहि महत्त्वपूर्ण स्थानहरू भ्रमण गर्नेछौं।
1 व्याख्या केन्द्र
2 एल प्यूर्टो
3 ला Calera
4 मार्टियो लाइटहाउस
5 एन्टोनियो एल फारेरो भोजनालय
6 इस्ला डे लोबोसमा कसरी पुग्ने?
7 इस्ला डे लोबोस कहाँ बस्ने?
इस्ला डे लोबोसलाई चिन्न सुरु गर्न के ला लालेरा बीचको छेउछाउको अर्थ केन्द्रमा जानु भन्दा बढि केहि राम्रो छैन। त्यहाँ हामीले टापुको उत्पत्ति र यसको नामको कारण पत्ता लगाउनेछौं: स्पेनिशको आगमन हुनु अघि त्यहाँ समुद्री सिंह वा भिक्षु छाप्रोहरूको ठूलो उपनिवेश थियो जसले जनसंख्याको लागि खानाको रूपमा सेवा गर्थ्यो जबसम्म तिनीहरू लगभग विलुप्त नभएसम्म। XNUMX औं शताब्दी। यस अवस्थालाई उल्ट्याउन, एक प्रोजेक्ट रहेको छ जुन मौरीटानियाबाट प्रजातिहरूको पुनः उत्पादन गर्न प्रतिबद्ध छ।
छवि | फुर्तेवेन्टुरा टापु
गोलाकार मार्गलाई धन्यवाद जुन क्यानरी टापुहरू पार गर्ने लामो दूरीको मार्ग हो, हामी केवल दुई घण्टामा लोबोस टापुको सबैभन्दा उल्लेखनीय कुनाहरू पत्ता लगाउन सक्छौं।
ती मध्ये एक एल प्युरिटो हो, सेता बालुवा समुद्र तट र सफा संरक्षित पानीहरूको समुह जुन ती छालहरूले घेरिएको ढुy्गाको चट्टानलाई धन्यवाद दिन्छ। यो दक्षिणी क्षेत्रमा अवस्थित छ र डाइभिंग र नुहाउनको लागि उत्तम स्थान हो। यसमा डकि boats डु boats्गा र माछा मार्ने डु boats्गाका साथै डाइभिंग एकेडेमी र माछावालाहरूका घरहरूको सानो समूह छ जुन यस टापुको बढ्दो जनसंख्याको कारण परित्याग गरिएको छ।
थोरै टाढा ला Calera बीच, एक डुबकी लिन को लागी पनि उत्तम छ तर यो एक समुद्र तट भन्दा धेरै हो। यो टापुको ठूलो रेतीले क्षेत्र हो जुनसँग एक सानो चुना भट्टा र पुरानो नुन पन हुन्छ जुन समुद्री पानीलाई छुट्याउन र माछालाई नुनिलो बनाउन प्रयोग गरिन्छ।
थप रूपमा, पत्थर संरचनाहरू उही समुद्री तटमा फेला परेको छ जुन विशेषज्ञहरूले पुरानो कारखानालाई श्रेय दिन्छ जसले समुद्री मोल्स्क (स्ट्र्रामोनिटा हेमास्टोमा) को प्रशोधनबाट बैजनी रyes बनाउँदछ। यो क्यानरी टापुको सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण पुरातात्विक साइट हो। हुकहरू, सिरामिकहरू, भित्ताहरू र हजारौं समुद्री घोंघाका अवशेषहरू यहाँ फेला परेका छन्।
वर्तमानमा यस समुद्री तटलाई दुई क्षेत्रहरुमा बाँडिएको छ: एक परिचित र व्यस्त र अर्को नग्नवादको अभ्यासका लागि एक्लो। त्यहाँ कुनै प्रकारका कुनै सेवाहरू छैनन् त्यसैले आगन्तुकहरूले घरबाट बाहिरको एक दिन खर्च गर्न चाहिने सबै कुरा ल्याउनुपर्नेछ। जे होस्, यस समुद्री तटबाट तपाईंसँग कोरालेजो र फुएर्टेभेन्चुराको समुद्री तटहरूको अविश्वसनीय दृश्यहरू छन्।
छवि | यात्री A ए
गोलाकार मार्ग जुन इस्ला डे लोबोसको माध्यमबाट जान सकिन्छ ला ला Calera बीचबाट सुरू हुन्छ। पथको पहिलो भाग ज्वालामुखी फोहोर जमिनमा जान्छ र यस ठाउँबाट तपाईं ला कैलेरा ज्वालामुखीको काटिएको शंकुमा चढ्न सक्नुहुन्छ यस टापुको उत्तरी किनारमा रहेको मार्टियानो लाइटहाउसमा पुग्न। माथिबाट तपाईंसँग व्यावहारिक रूपमा सम्पूर्ण आईलेटको र सामान्य पार्कको क्षितिजमा कोरेलेजोको ड्युन्सको प्राकृतिक पार्कको सामान्य दृष्टिकोण छ।
फिर्ती समुद्री पट्टीले गरेको हो र त्यहाँ कुनै पनि वनस्पति छैन, कालो ढु stones्गाको एक परिदृश्य भएको प्रमुख। मार्टियो लाइटहाउस एल पोर्टिटोबाट5किलोमिटर मात्र अवस्थित छ।
एन्टोनियो एल फारेरो भोजनालय
इस्ला डे लोबोसमा एउटा मात्र रेस्टुरेन्ट छ: आन्टोनियो एल फारेरो। यदि तपाईं यहाँ खान चाहानुहुन्छ भने तपाईंले डु off्गामा चढ्ने बित्तिकै टेबल आरक्षित गर्नुपर्नेछ। त्यहाँ दुई वा तीन पाली मात्र छन् र कम मेनु दिनको ताजा माछाको आधारमा प्रस्ताव गरिन्छ। जे होस्, यदि तपाईं बाहिर खान चाहानुहुन्छ भने, सबैभन्दा सिफारिश गरिएको कुरा भनेको टापुमा पिकनिक हुनु भनेको नियमहरूको सम्मान गर्नु हो।
इस्ला डे लोबोसमा कसरी पुग्ने?
फुलातेभेन्टुराको साथ इस्ला डे लोबोसलाई जोड्ने डु boats्गाहरू कोरालेजो बन्दरगाहबाट छुट्छन्। त्यहाँ कम्पनीहरू छन् जुन दिनको धेरै आवृत्तिहरूको साथ मार्ग बनाउँदछ। पहिलो डु boats्गा बिहान १० बजे कोरेलेजोबाट छुट्छ। र अन्तिम मानिसहरु बेलुका at मा फर्किन्छन्। जाडोमा र साँझ 10 बजे। गर्मी याममा।
इस्ला डे लोबोस कहाँ बस्ने?
इस्ला डे लोबोसमा त्यहाँ बस्ने ठाउँ छैन तर त्यहाँ ला क्यालेरा बीचको छेउमा शिविर क्षेत्र छ। यदि तपाईं यहाँ रात बिताउन चाहानुहुन्छ भने तपाईंले फुर्तेवेन्टुरा परिषदबाट अनुमति लिनु पर्छ र तपाईंले अधिकतम तीन रात मात्र शिविर बनाउन सक्नुहुन्छ। नियम तोड्ने वा लिटरिंग गर्ने जरिवाना धेरै बढी छ।
लेखको पूर्ण मार्ग: यात्रा समाचार » यात्रा » टापुहरू » इस्ला डे लोबोस, क्यानरी द्वीपसमूहको सबैभन्दा सानो
लिभरपूलमा के हेर्ने